भगवान श्रीगणेशले सबैको कल्याण गरुन, फाल्गुन २२ मंगलबार ६ मार्चको राशिफल
आज श्री शाके १९३९ बि.स. २०७४ साल फाल्गुन २२ गते मंगलबार इश्वी सन २०१८ मार्च ६ तारीख चैत्र कृष्ण पक्ष पञ्चमी तिथी चन्द्रमा तुला राशिमा सुर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु – ज्यो.पं. सरोज घिमिरे
नयाँ ब्यापार ब्यवसाय सुरु गर्न उत्तम समय रहेकोछ । सामान्य कार्य सम्पादनमा अधिक श्रम खर्चनु पर्ने समय रहेको छ । भौतिक श्रोत साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित हुनेछ । मान सम्मानमा सामान्य ठेस पुग्न सक्नेछ ।
तपाईको कार्यको श्रेय अन्य ब्यत्तिहरुलाई सहज रुपमा प्राप्त हुनेछ । यात्राका कारण अनाबश्यक खर्चको सम्भाबना रहेको छ । प्रतिस्पर्दा मुलक कार्यका क्षेत्रमा तथा सामाजिक कार्यमा तपाई अग्रता उत्तम साबित हुनेछ ।
अध्यन अध्यापनका निम्ती उत्तम समय रहेकोछ । साजेदारी कार्यमा भने सजग रहनु पर्ने समय रहेकोछ । ब्यापार ब्यवसायको क्षेत्र बाट मनग्य लाभ प्राप्त हुने समय रहेकोछ । प्रेम सम्बन्धमा भने सामान्य तनाबको स्थीति देखा पर्नेछ ।
सबारी साधको प्रयोगमा साधारण समस्या उत्पन्न हुन सक्नेछ । पारीवारिक साथ सहयोग मार्फत नयाँ कार्य प्रारम्भको योग रहेकोछ । सभासम्मेलन जन्य कार्यमा सहभागीता जनाउने समय रहेकोछ । मानसम्मान प्राप्तीको सम्भाबना रहेकोछ ।
बादबीवाद को झमेलामा फस्न सक्ने सम्भाबना रहेको छ । तपाईको बाणीकोगलत अर्थ लाग्न सक्छ बोल्दा होशपूर्याउनु होला । प्रियजनको स्वास्थमा सामान्य खराबि आउनाले मानसीक समस्या आईपर्न सक्नेछ । सामान्य यात्राको योग रहेको छ ।
भौतिक श्रोत साधनको प्रयोगले मन प्रशन्न रहला । मान्यजनको साथ सहयोग द्वारा गरीरहेको काममा बिशेष फाइदा प्राप्त हुनेछ । ब्यापार ब्यवसायको निम्ति राम्रो समय रहेको छ । दाम्पत्य सम्बन्धमा सुधार आउनेछ ।
बृश्चिक – राशि तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु
मित्रजन तथा दाजु भाई बिचको सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । प्रेमी प्रेमीका बिचको सम्बन्धमा केहि सुधार आउने छ । सामान्य आर्थीक अभाबको सामना गर्नु पर्ने छ । मेहेनत अनुरुपको फल प्राप्ति नहुनाले दिन निरासा पुर्ण ब्यतित हुने छ ।
प्रिय मित्रजनको भेटघाटले मन हर्शित रहनेछ । पतिपक्क्षीहरु सबल रहनाले कार्य सम्पादनमा झन्झट ब्यर्होनु पर्ला । नयाँ कार्यको थालनिले मन प्रशन्न रहला । बिद्या प्राप्ति योग तथा बौधिक बिकाश हुने समय रहेकोछ ।
सामान्य कार्यमा ज्यादा समय ब्यतित हुनसक्नेछ । परोपकारको क्षेत्रमा धेरै समय र परीश्रम खर्च हुन सक्छ । मान्यजनको अनुसरण बाट बिशेष लाभ प्राप्त हुने समय रहेको छ । दाम्पत्य शुखमा सामान्य खराबि आउन सक्नेछ ।
स्वास्थमा देखा परेको गढबढीले कार्य सम्पादनमा सामान्य झन्झट उत्पन्न गराउला । बोलिको कारण कुलकुटुम्ब सगँको सम्बन्धमा तिक्तता पैदा हुन सक्ला । तपाईको कार्यको फल अरुलाई सहजै प्राप्त हुनाले मनमा खिन्नता उत्पन्न हुनेछ ।